IZINTO EZI-7 EZITHETHWA ZIIKHONKWANE ZAKHO NGAWE - IIMPAWU ZEMPILO EZINGAQHELEKANGA
Izinto ezi-7 ezithethwa ziikhonkwane zakho Ngawe
Ifoto ngu-Stockbyte / Getty Izithombe
Umzimba wakho unesiphiwo sokwazisa xa kukho into engahambanga kakuhle, kwaye iinzipho zakho azikho ngaphandle. Ubume babo, ubume, umbala, kunye nemeko ngokubanzi inokukukhombisa ukuba kwenzeka ntoni kwimpilo yakho. Nazi izinto ezi-7 — ukusuka 'Tsiba isalon kule veki' uye 'Yiya kugqirha, umthetho!' - iinzipho zakho zizama ukukuxelela:
1. Ebuthathaka, Eqhekekileyo, okanye Eyokwahlulahlula
Injani: Unokwaphula okanye ugobe iinzipho zakho ngokulula, uzicobule, okanye zahlukane rhoqo.
Ithetha ukuthini: Iinzipho Brittle zinokunxulumana nokukhula, okanye umqondiso wokuba bagqityiwe ngenxa yoxinzelelo lwenzipho, iinzipho ze-acrylic, okanye i-gel wraps. Unokuba uswele i-vitamin A (enceda inkqubo yomzimba wakho kwiprotheyini kwaye sisithako esiphambili kwizikhonkwane zakho), ivithamin C, okanye i-biotin, eyi-vitamin B enokukunceda ukomeleza iinzipho nokukhawulezisa ukukhula kwazo.
Into omawuyenze ngayo: 'Thatha ikhefu! Nika iinzipho zakho ixesha lokuphefumla, 'ucebisa njalo uRebecca Baxt, MD, ugqirha wesikhumba oqinisekisiweyo eNew York. Beka i-salon iiveki ezimbalwa, kwaye ukuba uhlala uyi-washer rhoqo, qiniseka ukuba uzalisa ukufuma ezandleni zakho ngesilumisi esinzulu seenzipho. Ukuba oko akunakunceda, lixesha lokuthatha uhambo oluya kwi-dermatologist ukubona ukuba ukunqongophala kweevithamini kuyadlala.
Ifoto ngu-Elsa Konig Images / Getty Izithombe
2. Iinzipho ezimthubi
Injani: Njengoko igama libonisa, iinzipho zakho ziya kuba ne-tinge ecekeceke okanye etyheli.
Ithetha ukuthini: Inokuba zizinto ezininzi, ezinje ngezikhonkwane zomngundo, i-psoriasis, okanye amabala okutshaya. Kwinqaku elula, ukuthanda kwakho ipolish emnyama kungabekwa tyala.
Into omawuyenze ngayo: Ukuba iinzipho zakho zinamabala, cwina kwi-denture cleaner (nyani) uyakususa ibala. Ukuba ubutyheli buqhubeka, buba mandundu, okanye buhamba neentlungu, inokuba sisifo sokungunda. Awungekhe ube wedwa-malunga nama-50% kuko konke ukutshintsha kombala kubangelwa ngundo. Ngelishwa, usulelo lokungunda lunokuba yinkohliso ukoyisa, ngakumbi ukuba aluhoywanga. Ukutyheli kuyabonakala kwizigulana ze-psoriasis, njengesiphumo secala lamayeza athile, kunye nesiphumo sesimo esinqabileyo esibizwa ngokuba yi-yellow nails syndrome. Ukuba ubona utshintsho kwizipikili zakho, jonga ugqirha wakho.
3. Amachaphaza amhlophe
Injani: Amachaphaza amhlophe amhlophe abonakala ngathi aphezu komhlaba, kodwa xa uzama ukuwakhupha, awasayi kuguquka.
Ithetha ukuthini: Amachaphaza amhlophe kwizikhonkwane zihlala zibangelwa luhlobo oluthile lwengozi-nokuba yinto elula njengomnwe odibeneyo okanye isinqumli esineengcwangu.
Into omawuyenze ngayo: Banike ixesha lokuba bakhule baphele. Kodwa ukuba abahambi, jonga ugqirha wesikhumba, utshilo uBaxt. 'Isenokuba sisifo sokungunda.'
4. Iibhendi eziMnyama eziMnyama
Injani: Imigca emnyama yombala ebaleka ngaphezulu ukuya ezantsi, ngokunokwenzeka kumnyama emazantsi esikhonkwane sakho.
Ithetha ukuthini: 'Iibhanti ezime nkqo zixhaphakile kubantu abanesikhumba esimnyama,' utshilo uBaxt, 'kwaye banokuba ziziphukuphuku ezinobungozi ebhedini yesikhonkwane.' Nangona kunjalo, elinye iqela elitsha okanye elitshintshayo linokuba sisifo se- melanoma esiyingozi — umhlaza wolusu onokubulala.
Into omawuyenze ngayo: Ukuba amabhanti ayaqhubeka nokutshintsha okanye abe mnyama, jonga ugqirha wesikhumba ngokukhawuleza.
Ifoto nguGianni Diliberto / Getty Izithombe
5. Iipilisi zezipuni
Injani: Izipikili ziya kujongeka zikhutshiwe. Uvavanyo olulula: khama ithontsi elinye okanye amabini amanzi okushiya iliso embindini wesikhonkwane sakho. Ukuba amanzi ahleli ngaphezulu kunokutyibilika, zizipikili zepuni.
Ithetha ukuthini: UKyle Coleman, MD weWestlake Dermatology kunye neCosmetic Surgery uthi: Xa uneenzipho zepuni, unikezelo lwegazi alufikeleli embindini wesikhonkwane sakho ukuze lukhule. Ngamanye amaxesha, iinzipho zamacephe zingangumqondiso wesifo sentliziyo okanye i-hypothyroidism, imeko ephawulwe yidlala lengqula elingasebenziyo.
Into omawuyenze ngayo: Kuya kufuneka ubonane nogqirha wakho kwaye ufumane umsebenzi ofanelekileyo wegazi ukuze ufumanise ukuba loluphi uhlobo lokusilela olusemva kwalo. Ngamanye amaxesha, kunokumiselwa izongezo zentsimbi. Ukuba i-thyroid yakho iphelile, i-endocrinologist yakho iya kusebenza nawe ukuze ilungiswe.
6. Ukudilika okuthe tyaba
Injani: Ukudakumba okunzulu okuwela ebhedini yesikhonkwane.
Ithetha ukuthini: Utyhile umnwe wakho kumnyango wemoto? Ukuba ukhe wanomothuko ofanayo kwisikhonkwane sakho, yeyona mpendulo ilula. Kodwa ukuba ukwazile ukugcina amanani akho ecacile ekonzakaleni, ezi ndawo zibizwa ngokuba yimigca kaBeau- zingangumqondiso wento ebaluleke kakhulu: isifo seswekile esingalawulekiyo, izifo ezijikeleza emzimbeni, okanye nasiphi na isifo esinxulumene nomkhuhlane omkhulu (njengepneumonia okanye uqwilikana).
Into omawuyenze ngayo: Ukuba awuzange ufumane naluphi na uxinzelelo lwenzipho kodwa ube nemigca kaBeau, jonga ugqirha wakho kwakamsinyane kunokuba kamva.
7. I-Nail Beading
Injani: Imigca enqamlezileyo efana ne-wax yekhandlela.
Ithetha ukuthini: Ngokunokwenzeka utshintsho lwehomoni, imiba ye-thyroid, uxinzelelo, okanye isifo seswekile.
Into omawuyenze ngayo: Thetha nogqirha wakho malunga naziphi na ezinye iimpawu (kunye nokubethelelwa kwesikhonkwane) ukumisela isifo esichanekileyo. Ukuba unenkxalabo malunga ne-beading cosmetically, sebenzisa i-medium-grit buffer ukuhambisa kakuhle ama-pre-manicure.
izihlangu ezilungileyo zokuma imini yonke yabafazi
Eyona mveliso ilungileyo phantsi kwemibimbi yamehlo
Intlungu yendlebe luphawu lwe-covid 19
inombolo 1010 intsingiselo
ukuphiliswa komnyama omnyama
kuthetha ntoni ukubona u-1111
Inombolo yeengelosi ezingama-555